DAGAALKII BADAR [Qaybtii 2aad]
Casharka 30aad ee Siirada Rasuulkeenii Muxammed (S.C.W.)
Intaa ka dib waxaa bilaabmay dagaalkii wuxuuna u bilowday sidan: Nin la oran jirey Aswad binu Cabdil-asad Al-makhsuumi, oo ka mid ahaa ciidanka gaalada, ahaana sidiisaba nin akhlaaq xun, ayaa ka soo dhex baxay ciidankii gaalada isagoo leh "Ilaahay waxaan kula ballamay in aan darkooda ka soo cabbo ama aan soo dumiyo ama ka soke la igu dilo". Markii uu soo baxay ayaa waxaa u soo baxay Xamsa binu Cabdimudhali oo seef ka hor geeyey waxayna seeftii kala goysey dhudhunka, dhabar dhabar ayuuna u soo dhacay markaasuu xammaartay isagoo doonaya inuu dhaartiisii fuliyo oo darka gaaro hase yeeshee Xamsa ayaa ka daba tegay oo seef kale ku dhuftay isagoo darkii ku jira halkaas ayuuna ku naf waayey. Ninkaas ayaan aahaa ninkii ugu horreerey ee goobtaas Badar ku dhinta.
Waxaa markaas ciidankii qureysh ka soo banbaxay saddex nin oo isku hal qoys ah lana kala oran jirey Cutba ibnu Rabbiica, Walaalkiis Shayba ibnu Rabbiica iyo wiilkiisii Waliid ibnu Cutba. Nimankaas oo ahaa halyeeyadii qureysh waxay dalbadeen in saddex nin dhinaca kale soo banbaxaan. Waxaa markaa Rasuulku SCW u saaray saddex nin oo Ansaar ah oo kala ahaa Cawf binu Xaarith, walaalkiis Mucaad binu Xaarith iyo Cabdullaahi binu Rawaaxa. Nimankii qureysh waxay yiraahdeen iyagoo doonaya inay ogaadaan nimanka loo soo xulay "waa kuwama", markaasaa loogu jawaabay "waa koox ansaar ah", dabadeed waxay yiraahdeen "kuf wanaagsan baad tihiin danse idinkama lihin ee waxan doonaynaa ilma adeerradayo", weliba nin ciidanka gaalada ka mid aha ayaa intuu qayliyey yiri "Maxammadow noo soo saar rag noo qalma oo ciddayada ah". Markaas ayaa Rasuulku SCW wuxuu u soo saaray saddexdii nin ee ciidanka ugu xigey oo kala ahaa Xamsa binu Cabdimudhalib oo adeerkiis ahaa, Cali binu Abii-dhaalib oo ina adeerkiis ahaa iyo Cubeyda binu Xaarith oo ina adeerkiis ahaa. Markay saddexdaa nin soo banbexeen ayey haddana nimankii qureysh yiraahdeen "waa kuwama", markii ay isu sheegeen ayey yiraahdeen "waxaad tihiin kuf wanaagsan". Ka dib ninba nin ayuu ku hagaagay; sida uu Ibnu Isxaaq weriyey Cubeyda, oo saddexda muslimiinta aha u da'yaaraa, wuxuu u baxay Cutba, Xamsana wuxuu u baxay Sheyba, Calina wuxuu u baxay Waliid. Hase yeeshee Axmed binu Xanbal iyo Abii Daa'uud waxay weriyeen in Cubeyda u baxay Waliiid; Calina u baxay Shayba; Xamsana u baxay Cutba.
Isu banbaxaas ayaa bilaabmay, Xamsa iyo Cali si dhadhso ahba waxay uga takhaluseen labadii nin ee ku kala aaddanaa, hase yeeshee Cubeyda iyo ninkii ku beegnaa waxay is dhaafsadeen laba seefood oo laba nabar oo halis ayey isku dhufteen. Xamsa iyo Cali ayaa markaa u yimid oo ninkii kale is raaciyey, Cubeydana soo xambaaray hase ahatee dhaawacaas ayuu u dhintay Cubeyda afar ama shan beri dagaalka ka dib iyadoo ay muslimiintu jidka ku sii jiraan. Cali binu Abii-dhaalib wuxuu ku dhaaran jirey in ay arrinkaas ku soo degtay aayadan. (LABADAANI WAA DOODAYAAL KU DOODAY RABBIGOOD). (Suuratul-Xaj 19).
Nimankii mushrikiinta ahaa markay arkeen sida ay mubaarasadii (isu soo ban bixiddii) ku dhamaatay, jab iyo guul darro degdeg ahna ay u soo hoyatey, ayna waayeen saddex oo odeyaashoodii ahaa, kana mid ahaa fardooleydoodii, dagaalkana wax ka hoggaaminayey, ayey hal mar soo qaadeen weerar ballaaran iyagoo ay ka muuqato caro daran.
Muslimiintii markay arkeen nasriga iyo guusha degdegga ah ee Ilaaha u soo hooyey iyo dhinaca gaalada jabka ku dhacay iyo weliba weerarka ay hadda soo qaadeen ayey galeen difaac iyagoo fulinaya amarkii Rasuulka SCW ee ahaa "dagaal ha qaadina ilaa aan amar idin siiyo, markay idiin dhawaadaan fallaaraha ku gana, hana la bixina seefaha ilaa ay idin dul yimaadaan, taasoo ay xikmadda ku jirtaa tahay in xamaasaddoodu ay jabto weerarkana ay ku hoobtaan sidaad darteed ayaa waxaa ku dhacay gaaladii khasaare sun.
Rasuulku SCW wuxuu baryayey Rabbigiis, ducadiina wuu ku ilxaaxyey (ku cel celiyey) isagoo leh "Allahayow i sii wixii aad ii yaboohday, Allahayow waxaan kugu baryayaa ballaantii iyo yaboohii aad iga qaaday, Allahayow haddaad kooxdan (muslimiinta) maanta halaagtid dib dhulka lagugu caabudi maayo, Allahayow haddaad doonto lagu caabudu maayo maanta ka dib weligeed. Aad ayuu Rasuulku SCW ugu xeeldheeraaday (ducada) isagoo Rabbigiis gargaar weydiisanaya oo isu dulleynaya ilaa uu go'iisii kor ka dhacay. Abuubakar ayaa u soo qaaday go'ii oo Rasuulka SCW ku yiri "Rasuulkii Allow kugu filan, Rabbigaana waad ku ilxaaxisay". Sidaa oo kale ayaa looga baahan yahay qofka mu'minka ah ee mujaahidkaa markuu dadal nooc walba ah la yimaaddo inuu Ilaahay baryo oo uu gargaarkiisa weydiisto uguna tadarruco (isu bihin bihiyo), una arko ciidan iyo awood wax walba oo uu isu keeno ineysan wax tarayn hadduusan Rabbi u gargaarin.
Intaa ka dib Allaah ayaa u waxyooday Rasuulkiisa SCW oo ku soo dejiyey aayaddan:
((XUSUUSTA MARKAAD GAG GAAR WAYDIISANAYSEEN RABBIGIIN OO IDINKU AJIIBAY WAXAAN IDINKU SIYAADIN KUN MALAA'IGTA KA MID AH OO IS RAAC RAACSAN, ALLENA (ARRINKAAS) WAX KALE UMA YEELIN ILAAA BISHAARO IYO IN AY QULUUBTIINU KU XASISHO MAAHANE, NASRIGUNA MEEL KALE MA AHAA, ALLE AGTIISA MA'AHAANE, ALLENA WAXA UU AHAADAY ALLE QAALIB AH OO XAKIIM AH)), (Suuratul-Anfaal 9-10).
Wuxuu Allaah sidoo kale u waxyooday malaa'igtii oo ku yiri aayaddan:
((MARKUU RABBIGAA U WAXYOODAY MALAA'IGTA (OO UU YIRI) ANAA IDINLA JIREE SUGA (XOOJIYA) KUWA MU'MINIITA AH, WAXAAN KU RIDAYAA KUWA GAALOOBAY QULUUBTOODA ARGAGAX EE KA GARAACA LUQUNTA KORKEEDA, KANA GARAACA XUBIN WALBA)), (Suuratul-Anfaal 12).
Rasuulku SCW wax yar ayuu markaas lulmooday ka dibna madaxa ayuu kor u qaaday oo samada eegay wuxuuna yiri "bishaareyso Abuubakarow waxaa kuu yimid nasrigii Ilaahay, kani waa Jibriil oo faraskiisii wata, wejiga faraskiisuna uu boor leeyahay". Riwaayad kale oo Bukhaari weriyey waxay ahayd "bishaarayso Abuubakarow waxaa kuu yimid narsigii Alle kani waa Jibriil oo ku dheggen faraskiisa madixiisa oo qalabkisii dagaalka wata". Rasuuku SCW wuxuu ka soo baxay waabkiisa isagoo qaba cambuur bireedkiisi, wuxuuna akhrinayay aayaddan:
((WAA LA JABIN JAMACA (CIIDANKA GAALADA) DABADAYNA JEEDIN)), (Suuratul -qamar 45).
Ka dib wuxuu qaatay cantoobo ciid ah oo ku seyriyey ciidanki gaalada. Ciiddii ayaa markaa Allaah gaarsiieyey kulligood oo ka gashay indhaha, sanka iyo afka. Allaahna wuxuu soo dejiyey aayaddan:
((MA IDINNAAN LAYN IYAG (GALADA) EE ALLAAH LAAYEY, MANA AADAN GANIN MARKAAD GANAYSAY EE ALLAA GANY (OO INDHAHA KAWADA GALIYEY), SI UU MU'MINIINTA UGU NIMCEEYO NIMCO WANAAGSAN, WUXUUNA ALLE YAHAY (ALLE) WAX MAQLA OO KU CILMI LEH)), (Suuratul-Anfaal 17).
Rasuulku SCW wuxuu markaa bixiyey amarkii kama dambaysta ahaa wuxuuna amray in ay weerar qaadaan wuxuuna ku booriyey dagaalka isagoo leh "Allihii Maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtey baan ku dhaartaye, nin maanta ma dagaallamo oo lama dilo isagoo sabraya ajarna urursanaya soona jeeda oo aan daba jeedin illaa Ilaahay Janno ayuu gelinayaa". Wuxu kaloo yiri "u istaaga Janno ballaarkeedu le'eg yahay smawaatka iyo dhulka". Cummayr ibnu Xammaam ayaa markuu hadalkaa maqlay yiri "bakhin bakhin" (oo uu ula jeedo liibaan liibaan), Rasuulku SCW wuxuu ku yiri "maxaa kugu xambaaray hadalkan?", Cummayr ayaa yiri "Rasuulkii Allow wax kale iguma xambaarin illaa inaan damcayo inaan ehelkeeda (jannada) ka mid noqdo maahane". Rasuulku SCW wuxuu yiri "ehelkeeda ayaad ka mid tahay", Cummayr timir uu cunayey ayuu tuuray oo yiri "haddaan noolaado intaan timirtan ka cunayo waa nolol dheer" wuuna dagaallamay ilaa uu ka shahiiday. Sidoo kale Cawf binu Xaarith ayaa yiri "Rasuulkii Allow maxaa addoonku Rabbigiis ku farax geliyaa?". Rasuulku SCW wuxuu ugu jawaabay "Ilaahay waxaa farax geliya inuu arko addoonkiisa oo gacantiisa dhex geliya cadowga isagoon waxba wadan" (oo uu ula jeedo dagaalama isagoon wax uu isku difaaco (canbuur bireed) wadan). Markaas ayuu Cawf orday oo dagaallamay ilaa laga dilay.
Rasuulku SCW khiddadii uu isticmaalay, oo ahayd in gaalada la weeraro markay xamaasaddoodu jabto, waxay ahayd xeelad aad u cajiib badan oo ay mulimiintu aad ugu faa'iideysteen, gaaladiina ku ridday niyad jab iyo fashil iyo in safafkoodii kala jabaan.
Waxaa kale oo muslimiinta intaa u sii dheerayd dhiirrigelintii Rasuulka SCW iyo wacdarihii uu ka muujiyay goobaha dagaalka, iyo sidoo kale malaa'igtii Ilaahay oo dagaalka ku jirtey oo iyaduna gaalada ka goyneysey luqumaha dushooda iyo xubin walbaba. Riwaayd laga weriyey Cikrama binu Subaji wuxuu ku yiri 'maalinkaas waxaa la arkayey madax go'aya iyo gacan finiineysa oo aan la ogeyn cidda ku dhufatay".
Abuu Daa'uudal-maasini wuxuu yiri "waxaan ceyrsaday nin mushrikiintii ka mid ah si aan u dilo, markaasaa madaxiisii soo dhacay seeftaydii oo aan gaarin, markaasaan ogaaday in cid kale dishay". Sidoo kale in Ansaartii Rasuulka SCW ka mid ah ayaa soo qafaashay Nabiga SCW adeerkii Cabbaas binu Cabdimudhalib markaasuu u keenay Rasuulka SCW, markaasaa Cabbaas yiri "Ilaah baan ku dhaartaye inuusan kani i soo qafaalin ee waxaa i soo qafaalay nin ka mid ah kuwa ugu weji qurxoon dadka oo saaran faras, haddan aanan ku dhex arag ciidanka". Ninkii saxaabiga ahaa ayaa markaa yiri "anigaa soo qafaalay Rasuulkii Allow", markaasaa Rasuulku SCW yiri "aamus Ilaahay baa kugu xoojiyey malak wanaagsane". Arrimahaas oo dhan waxay ku tusayaan sida ay malaa'igtii Rabbi uga qayb qaadatay dagaalkaas, nasrigii Allaahna ugu dhaboobay goobtaas.
Cid walba oo u istaagta manhajka Alle iyo in ay kalimaddiisu kor noqoto Allaah waa u gargaarayaa, ciddii ka hor timaadda manhajkiisa oo diaacda jidka sheydaankana Allaah garabkooda ayuu ka baxayaa. Sidaa darteed nimankii qureysh ahaa garabkooda ayuu Allaah ka baxay, safafkoodiina way kala jajabeen, waxayna bilaaben carar iyo insixaab (dib u gurasho).
Ninkii la oran jirey sheydaan oo awal isku soo ekeysiiyey Suraaqa ibnu Maalik sidaan soo sheegnayba oo laga soo bilaabo ilaa Makka la soo socday, markuu arkay malaa'igtii Allaah oo soo degayso ayuu cararay. Xaarith ibnu Hishaam, oo ka mid ahaa odeyaashii qureysh, ayaa sheydaankii tafta ku dhegay isagoo u malaynaya Suraaqa ibnu Maalik, markaasaa sheydaankii xabadka ku dhuftay oo ku cararay. Ciidankii gaalada qaar ka mid ah ayaa markaa ku qayliyey oo yiri "xaggee u socotaa Suraaqo?", miyaadan dhihin waan idinla joogayaa oo idin faaruqi maayo?", markaasuu yiri "waxaan arkaa wax aydin arag , aniga Allaah ayaan ka baqayaa". Allaahna isagoo arrintaan tilmaamaya wuxuu yiri:
((MARKUU SHAYDAANKU U QURXIYAY CAMALKOODA OO KU YIRI WAX IDINKA QAALIB NOQON KARA OO AAD DAD AH MAJIRO ANNA WAAN IDIN LA JIRAA, MARKAY IS ARKEEN LABADII CIIDANNA GADAAL BUU U GURTAY, WUXUUNA YIRI "ANIGA BARIBAAN IDINKA AHAY WAXAANA ARKAA WAXAYDAAN ARAG, WAXAANA KA BAQAYAA ALLE, OO WUXUU ALLE AHAADAY MID CIQAABKIISU DARAN YAHAY)), (Suuratul-Anfaal 48).
Mujrimkii weynaa ee Abii Jahal markuu arkay waxa ciidankiisii ku dhacay iyo waxa uu Suraaqa ninkii uu u heystay sameeyay, ayuu ciidankiisii la hadlay oo ku yiri "yeysan idin niyad jebinin khiyaanada Suraaqa, maxaa yeelay Maxammad ayuu ballan la lahaa, yeysanna idin murug gelinnin dilitaanka Cutba, Shayba iyo Waliid maxaa yeelay way degdegeen, Laata iyo Cusaan ku dhaartaye noqon mayno ilaa aan Maxammad iyo dadkiisa xargo ku xirxirno, hama dilina ee soo qabqabta si aan u ogeysiino xumaatadadii ay sameeyeen". Hase yeeshee hantaatacaas Abii Jahal waxba ciidankii uma siyaadin maxaa yeelay xaqiiqdii ayey indhohooda ku arkeen, meeshoodii ayeyna baqdintii iyo cararkii ka sii wadeen, qoortana looga guray.
Cabdiraxmaan ibnu Cawf wuxuu yiri "maalinkii Badar anigoo safka ku jira ayaa dhinacayga midig fiiriyey mise waxaa jooga wiil da'yar, dhinacayga bidix ayaan haddana fiirshey isna waxaa joogey wiil da'yar oo kii hore le'eg , markaasaan is iri "waaba anigoo aan aammin ku ahayn booska ay iga joogaan. Ka dib labadii wiiil midkood ayaa isagoo kii kale ka qarsanaya igu yiri "adeer Abii Jahal i tus" markaasaan ku iri "adeer maxaad ku samaynaysaa", wuxuu yiri "waxaaa la ii sheegay inuu caayi jirey Rasuulka Allaah SCW, Ilaahay ay nafsaddaydu gacantiisu ku jirtey baan ku dhaartaye haddaan arko inaanan is gefaynin ila midkayagii horreeyaa dhinto", markaasaan la yaabay. Kii kale ayaa isna i qanjaruuftay oo sidii oo kale igu yiri. Muddo yar ka dib waxaan arkay Abii Jahal oo ciidankii dhex boodaya, markaasaan labadii wiil ku iri "miyeydiinaan u jeedin, wa kaas saaxiibkiinnii aad i weydineyseen", markaas ayey hal mark isa sii daayeen oo seefihii ku boobeen ilaa ay dhulka dhigeen". Ka dib labdii wiil Rasuulka SCW ayey u yimaadeen, wuxuu ku yiri "kiinnee diley?", mid kasta wuxuu yiri "aniga ayaa diley", Rasuulku SCW wuxuu yiri "ma masaxdeen seefihiinna?", waxay dheheen "maya", markaas ayaa Rasuulu SCW seefahodii eegay oo ku yiri "labadiinnuba waa disheen". Dagaalku markii uu dhammadayna hubkii Abii Jahal wuxuu siiyey mid ka mid ah labadoodii oo la oran jirey ibnu Camar ibnu Jumuux maxaa yeelay kii kale oo la oran jirey Mucaad binu Cafraa' goobtii ayuu ku shahiidey.
Markii dagaalkii dhamaaday ayaa Rasuulu SCW yiri "yaa soo eegaya waxa Abii Jahal lagu sameeyey?" markaas ayaa asxaabta qaar ka mid ah baadi goob u galeen. Waxaa helay Cabdullaahi ibnu Mascuud isagii oo naf xumi ku jirto, Cabdullaahi qoorta intuu cag ka saaray, garkana qabtay ayuu madaxa ruxay kuna yiri "ma wuusan Alle ku hoojin cadowgii Allow?". Abii Jahal wuxuu yiri "maxaa i hoojiyey, ma nin tolkiis diley baan u horreeyey, yaase maanta guusha helay?", Cabdullaahi wuxuu yiri "Alle iyo Rasuulkiisa SCW ayaa helay". Markaasuu Abii Jahal yiri "ari raaciiyow waxaad maanta kortay meel sarreysa", Cabdullaahi wuxuu yiri "weligeedba islaamka ayaa sarrayn jirey". Ka dib Cabdullaahi intuu madaxii ka soo gooyey ayuu u keenay Rasuulka SCW oo yiri "Rasuulkii Allow, cadowgii Alle ee Abii Jahal madaxiisii waa kan". Rasuuku SCW markuu arkay wuxuu yiri "Allihii isaga maahane uusan Ilaah kale jirin baan ku dhaartaye ma isagii baa?! Allaah ayaa weyn, Allaah ayaa mahad leh, Allihii yaboohiisii ku run sheegay, addoonkiisii u gargaaray, axsaabtiina keligiis jebiyey". Ka dib wuxuu Rasuulku SCW yiri "kani (Abii Jahal) waa fircoonkii ummaddaan".
Wuxuu Nabigu SCW yiri "waxaan aqoonsaday in rag reer bini Haashim ka mid ah iyo kuwo kaleba la soo khasbay oo ay san dagaalkeenna dooneyn, haddaba qofkii la kulma qof reer banii Haashim ah yuusan dilin, qofkii la kulma Abaa Bakhtari binu Hisham yuusan dilin, qofkii la kulma Cabbaas binu Cabdimudhalibna yuusan dilin waa la soo khasbaye". Markaas ayaa Abuu xudeyfa binu Cutba, oo aabbihiis, walaalkiis iyo adeerkiis lagu dilay goobta, yiri "ma waxaan leyneynaa aabbayaashayo, walaalahayo iyo qaraabadayo, Cabbaasna waa iska deynaa? Ilaah baan ku dhaartaye haddii aan la kulmo seef baan ku dilayaa". Arrintii ayaa Rasuulka SCW loo sheegay, markaas ayaa Cumar binu Khadhaab yiri "ii daa Rasuulkii Allow aan seef qoorta uga gooyee, Ilaah baan ku dhaartaye waa munaafaqoobey". Abuu Xudeyfa wuxuu dhihi jirey "kama aammin ihi kalimadii aan iri maalinkii Badar, waana ka cabsi qabaa in la ii dhaafi doono ilaa in shahaado (shahiidnimo) la iig dhaafo maahane". Abuu Xudeyfa wuxuu aakhirkii ku shahiiday dagaalkii Yamaama.
Ninkii la oran jirey Abaa Bakhtari oo Rasuulku SCW yiri yaan la dilin, waxay ahayd sababta loo yiri, markii Makka la joogey ayuu Rasuulka SCW ka celin jirey dadka, Rasuulka SCW iyo islaamkana wax dhib ah uma geysan jirin, wuxuuna ka mdi ahaa raggii baabi'ieyey warqaaddii kacbada ku dhegsaneyd ee lagu cunaqabateeyey rer banii Haashi, hase ahaatee ninkaas waa la diley oo rag asxaabtii ka mid ah ayaa arkay isaga iyo nin kale oo saaxiibkiis ah, markaasay ku dheheen "adiga kula dagaallami mayno oo waa nalaka reebay dilitaankaaga", markaasuu yiri "saaxiikayna" waxay dheheen "ma deyneyno saaxiibkaa", markaasuu ku yiri "haddaba waa wada dhimanaynaa aniga iyo saaxiibkey", markaas ayey dagaallameen oo labadoodiiba halkaas lagu diley.
Sidoo kale Cabdirahmaan binu Cawf oo wata canbuur bireedyo uu soo qaniimeystey ayaa wuxuu soo maray Umaya ibnu Khalaf oo ahaa ninkii Bilaal addoonsan jirey, ciqaabka daranna mariyey (markii uu Bilaal islaamay) iyo wiil uu dhalay Umaya oo la oran jirey Cali oo meel taagan markii ay arkeen in aysan fakan karin, markaasaa Umaya la hadlay Cabdiraxmaan oo ay ahaan jireex saaxiibbo waqtigii jaahiliga ee Makka la joogey, wuxuuna ku yiri "canbuur bireedyadan aad wadato anigaa kaga faa'iido badan ee miyaadan xoolo dooneyn "oo uu ula jeeday in isaga iyo wiilkiisa uu qafaalo si aan loo dilin, dabadeedna ay hadhow xoolo tiro badan isku furtaan. Cabdirahmaan, intuu canbuur bireedyadii tuurey, ayuu kexeeyey Umaya iyo wiiliisi", goor uu sii wado ayuu Umayd ku yiri Cabdiraxmaan; "kumuu ahaa ninkii riishadda xabad ku watay? markaasuu Cabdiraxmaan yiri "wuxuu ahaa Xamsa ibnu Cabdimudhalib", Umaya wuxuu markaa yiri "kaas ayuu ahaa ninkii arrinta nagu sameeyey (na laayey)". Cabdiraxmaan wuxuu yiri "goon aan dhexda sii marinayo ayaa waxaa arkay Bilaal, markaasuu dhawaaqay oo yiri "waa madaxii kufriga Umaya ibnu Khalaf magangal kuuma sugnaan", markaasaan iri "waa u sugnaaday magangal", Bilaal ayaa markaa aad u dhawaaqay oo yiri "Ansaartii Allaay waa kufriga Umaya ibnu Khalaf magangal uma sugnaan". Ka dib way na hareereeyeen, aniguna waan isku daboolay, markaas ayey wiilkiisii seef lug uga gooyeen, Umaya ayaa markaa qaylo aanan weligey iyadoo kale maqal ku qeyliyey, markaas ayaan ku iri "badbaadi naftaada magangal kuuma sugnaanine, aniguna Ilaah baan ku dhaartaye wax kuuma tari karo". Ka dib seefihii ayaa lagu boobey ilaa laga takhalusay labadoodiiba". Cabdiraxmaan mid ka mid ah seefihii muslimiinta ayaa dhudhunka uga dhacday, ka dib Cabdiraxmaan wuxuu dhihi jirey "Alle ha u naxariisto Bilaal dhudhunkeygii ayuu dhaawacay, asiirkieygiina (qafalkeygiina) waa diley".
Cumar binu Khadhaab sidoo kale wuxuu maalinkaas diley abtigiis Caasin binu Hishaam, Abuubakarna wuxuu u dhawaaqay wiilkiisii Cabdiraxmaan oo dhinaca gaalada ka soo jeedey isagoo leh 'qurunyahow meeyey maalkeygii", markaasuu Cabdiraxmaan yiri "waxaa ka haray hub, faras carbisan iyo seef dileysa duq baadiyoobey".
Waxyaabihii mucjisaadka ahaa ee meeshaa ka dhacay waxaa ka mid ahaa; ninka la yiraahdo Cukaasha binu Muxsin ayaa waxaa jabtay seeftiisii, markaasuu Rasuulka SCW u yimid isagoo seef ka doonaya. Rasuulku SCW, wuxuu siiyey qori wuxuuna ku yiri "ku dagaal Cukaash". Markii uu Cukaasha qaatay ayey ruxantay oo noqotay seef dheer oo adag, birteeduna caddahay, dagaalkii ayuuna ku galay Cukaasha, waxaana seeftaa la dhihi jirey Cawn, wuuna heysan jirey oo wuxuu ku geli jirey jikhaadyada ilaa uu aakhirkii ku shahiidey dagaalkii uu Abuubakar ku qaaday dadkii riddoobey markuuu Rasuulku SCW geeriyoodey. Sidoo kale waxyaabihii uu iimaanku ka muuqday ee goobtii badar ka dhacay waxaa ka mid ahaa; markuu dagaalku dhammaaaday ayuu Muscab binu Cumeyr soo maray walaalkiis Abii Casiis binu Cumeyr oo nin muslim ihi soo qafaalay. Markaasuu ku yiri "si fiican u adkee hooyadiis xoolo ayey leedahay oo waxaa la arkaa in ay furato". Abuu Casiis aya markaas yiri "ma taas ayaad ii dardaarantay walaalkayow". Muscab wuxuu yiri "kan ayaa walaalkay ah" oo uu ula jeeday saxaabigii waday.
Arrimahaas oo ku tusinaya sida uu asxaabta Rasuulka SCW iimaanku qalbigooda u degey oo aysan wax yar oo naxariis ah ugu hayn dadkaas Ilaahay diintiisii iyo manhajkiisii la colleytamay haba ahaadeen aabbayaashood, addeeradood, walaalahood, abtiyaashood ama qaraabadoodii. Waxayna ku run shegeen aayaatkii Allaah sida kuwaan:
((KUWA MU'MINIINTA AHW HAKA YEELANINA AABAYAALKIIN IYO WALAALIHIIN WALIYO HADDAY GAALNIMO KA JECLAADAAN IIMAANKA, CIDII KA WALI DHIGATA (GAALO) OO IDINKA MIDA, KUWAASAA UN DAALIMIIN AH)), (Suuratu-Tawbah 23).
((MA HELAYSID DAD RUMEEYEY ALLE IYO MAALINKA AAKHIRO IN AY JECLAADAAAN CID KHILAAFTAY ALLE IYO RASUULKIISA, HABA AHAADAAN AABAYAALKOOD, CARUURTOODA, WALAALAHOOD, IYO QARAAABADOODA, KUWAAS (AAN JECLAANIN GAALADA) WAA KUWA QULUUBTOODA LAGU QORAY IIMAANKA, WUXUUNA (ALLE) KU XOOJIYEY GAG GAAR XAGIISA KA AHAADAY, WUXUUNA GALINAYAA JANNOOYIN AY HOOSTEEDA SOCONAYAAN WABIYAAL, WAYNA KU WAARAYAAN DHEXDEEDA, ALLE WAA KA RAALI NOQDAY IYANA WAA KARAALI NOQDEEN, KUWAASI WAA XISBIGA ALLE, XISBIGA ALLE UN BAANA LIIBAANAY)), (Suuratul-Mujaadala 22).
Ugu dambayntii markii dagaalkii dhammaaday, jab iyo halaagna ku habsaday ciidankii kufriga ee difaacayey waddada baadhilka ah ee sheydaanka, ayna u qaybsameen wax dhintay, wax la qafaashay iyo wax cararay oo uu dhaawac ka buuxo, Allaahna uu guul iyo nasri u soo hooyey xisbigiisii u dagaallamayey in kalimadda Allaah kor noqoto, kalimadda sheydaankuna hooseyso, goobtiina ay iyagu furteen oo u hareen, ayaa Rasuulku SCW wuxuu amray in ceel ka mid ahaa ceelashii Badar lagu guro bakhtigii gaalada, markaas ayaa lagu guray iyadoo qof qof laagu ridayo.
Dadkii muslimiinta ahaa ee goobtaas ku shahiiday waxay dhammaayeen 14 nin; 6 Muhaajiriin ah iyo 8 Ansaar ah, gaaladana waxaa ka dhintay 70 nin oo u badnaa madaxdoodii iyo odeyaashoodii, waxaana laga qafaashay 70 nin oo kale. Rasuulku SCW raggii odeyaashooda ahaa ayuu magacyadoodii ugu yeeray oo ku yiri "ma idin farax gelineysaa in aad Ilaah iyo Rasuulkiisa adeecdaan? annagu waan helnay wuxuu Rabbigayo noo ballan qaaday isaga oo xaq ah ee ma hesheen wuxuu Rabbigiin idiin ballan qaaday isaga oo xaq ah?" Cumar binu Khadhaab ayaa Rasuulka SCW ku yiri "Rasuulkii Allow maxaad ula hadlaysaa jir aan naf lahayn?", wuxuu markaas Nabiga SCW yiri "Allihii nafsadda Maxammad gacantiisa ku jirtey baan ku dhaartaye ugama maqal badnidin waxa aan leeyahay, laakiin ma jawaabayaan".
Ciidankii gaaladu markii ay hasiimo ku dhacday oo uu jabay ayuu kala firxaday iyadoo uu nin walba wejiga saaray meeshii ka horreysey. Magaaladii Makkana waxa ay suggeysey natiijada dagaalka iyo warka cusub ee ka soo yeeri doona goobta dagaalka.
Ibnu Hishaam wuxuu yiri "ninkii ugu horreeyey ee Makka tagay wuxuu ahaa nin la oran jirey Xaysamaan binu Cabdullaahi Al-khusaaci, markaas ayaa lagu yiri "bal noo warran", wuxuu yiri "Cutba binu Rabbiica waa la dilay, Shayba binu Rabbiica waa la dilay, Abii Jahal binu Hishaam waa la dilay, Umaya ibnu Khalafna waa la dilay". Markuu raggii magaca lahaa oo dhan tiriyey ayaa waxaa hadlay Safwaan binu Umaya oo qolka dhexdiisa fadhiyey wuxuuna yiri "Ilaah baan ku dhaartaye kani waxba ma oga ee bal aniga i weydiiya (iga waraysta) xaalkeyga", markaas ayey dheheen "ka warran Safwaan binu Umaya?", wuxuu yiri "waa kaa halkaa fadhiya, Ilaah baan ku dhaartaye aabbihiis iyo walaalkiis ayaa arkayey markii la dilayey.
Dhinaca Madiina, oo iyaguna sugayey akhbaarta cusub iyo waxa soo yeeri doona, ayaa markuu Rasuulku SCW helay narsirii Allaah waxa uu dhinaca Madiina u diray labo nin oo asxaabtiisa ka mid ahaa oo kala ahaa; Seyd binu Xaarith iyo Cabdullaahi binu Rawaaxa. Wuxuuna u kala diray labada dhinac ee magaalada Madiina. Dhinaca sare wuxuu u diray Cabdullaahi, dhinaca hoosena Seyd.
Yahuuddii iyo munaafiqiintii joogey Madiina waxay intaa dagaalka lagu maqnaa fidinayeen dacaayado been ah ilaa ay markii dambe faafiyeen in Nabiga SCW la dilay. Nin munaafiqiinta ka mid ahaa ayaa wuxuu arkay Seyd binu Xaarith oo soo socda oo fuushan hashii Rasuulka SCW, markaas ayuu yiri "Maxammad waa la dilay waa tan hashiisii aannu ku naqaanay, kanina waa Seyd oo aan ogeyn waxa uu ku hadlayo argagax dartiis, firxadkii baana yimid." Wax yar ka dibse markii ay labadoodii (Seyd iyo Cabdullaahi) galeen magaaladii ayaa dadkii muslimiinta ahaa isku soo hareereeyey iyagoo dhagaysanaya warka cusub ee ka soo yeeray goobtii dagaalka. Markii ay dhegaysteen guusha iyo nasriga uu Ilaah muslimiinta u soo hooyey waxaa la ruxantay tahliil iyo takbiir, Usaama binu Seyd wuxuu yiri "Waxa uu warku noo yimid annaga oo markaa ciidda ku rognay gabadhii Rasuulka SCW Ruqiya binu Maxammad SCW, oo uu qabay Cusmaan ibnu Cafaan. Xanuunkaas gabadha awgeed ayuu Rasuulku SCW Cusmaan uga soo reebay ciidanka, qaybtiisii dagaalka badarna waa uu u dhigay.
Rasuulku SCW waxa uu sii degganaa goobtii Badar saddex maalmood, laga soo bilaabo markii uu dagaalku dhammaaday. Intii meeshii la joogay muslimiinta qayb ka mid ahi waxa ay ceyrsadeen gaaladii, qayb kalena waxa ay ururinayeen qaniimadii meesha laga helay, qayb saddexaadna Rasuulka SCW ayey waardiyeynaysay. Khilaaf yar ayey markaas asxaabtu isku khilaafeen xoolihii qaniimada ahaa ee gaalada laga furtay. Markaas ayaa Rasuulu SCW amray in xoolihii oo dhan la soo ururiyo oo isaga loo keeno. Waxaa markaas soo dagtay aayaddan:
((WAXAY KU WAYDIINAYAAN (XUKUNKA) QANIIMADA, WAXAAD DHAHDAA QANIIMADA WAXAA ISKA LEH ALLE IYO RASUULKA SCW, EE KA BAQA ALLE OO WANAAJIYA DHEXDIINA, WAXAADNA ADEECDAAN ALLE IYO RASUULKA SCW HADDII AAD TIHIIN MU'MINIIN)), (Suuratul-Anfaal).
Ka dib Rasuulka SCW iyo ciidankiisii Madiina ayey aadeen iyagoo wata 70 nin oo qafal ah. Maxaabistaas waxaa waday Cabdullaahi ibnu Kacab. Rasuulku SCW wuxuu markaas degay meel dhexe oo uu ciidankiiiugu qaybiyey xoolihii gaalada laga soo furtay, ka dib markuu ka saaray khumuskii.
Intaa ka dib Rasuulku SCW jidka ayuu sii qaaday, markuu marayo meesha la yiraahdo Safraa ayuu amray in la dilo Nadar binu Xaarith oo ahaa ninkii waday calanka gaalada, kana mid ahaa kuwii ugu waaweynaa dambiilayaasha qureysh, islaamkana aad u necbaa. Waxaa ninkaas qoorta u dheereeyey Cali binu Abii-dhaalib. Waddadii ayay ku sii socdeen Rasuulka SCW iyo ciidankiisii marki ay marayaan meesha la yiraahdo Cirqu Dubaya ayuu Rasuulku SCW amray in la dilo Cuqba ibnu abii Muceydh oo ka mid ahaa 70kii nin ee maxabiista ahaa. Ninkaas oo dhibaatooyinkiisa qaar ka mid ah aynu kitaabkan bilowgiisa kaga soo hadalnay wuxuu ahaa ninkii mandheerta saaray Rasuulka SCW markuu kacbada ku tukanayey, sidoo kale wuxuu ahaa ninkii marada ku ceejiyey Rasuulka SCW oo ku sigey inuu dilo. Haddaba ninkaa oo ka mid ahaa dadkii aadka u dhibay Rasuula SCW iyo diinta islaamka markii uu Rasuulku SCW amray in la dilo ayuu yiri "yaa maatada u jooga Maxammadow?" Rasuulkuna SCW wuxuu ugu jawaabay "naar". Waxaa ninkaa isagana dilay Caasim binu Thaabit Al-ansaari, waxaa kale oo la dhahaa waxaa dilay Cali binu Abii-dhaalib. Rasuulku SCW qof kale kama dilin dadkii maxaabiista ahaa, laakiin labadaan si degdeg ah ayuu u amray dilkooda shartooda oo badnayd awgeed.
Rasuulku SCW markuu marayo meesha la yirahdo Rawxaa ayaa waxa ka hor tegay qaar ka mid ahaa muslimiintii Madiina ku haray, iyagoo u tahniyadeynaya oo soo dhowaynaya Rasuulka SCW iyo ciidanka, waxaa markaas hadlay Salama ibnu Salaama oo ka mid aha ciidanka oo yiri "maxaad noogu tahniyadeyneysaaan Ilaah baan ku dhaartaye waxaan la kulannay habro fadhfadhiya sidii geelii", markaas ayaa Rasuulku SCW dhoolla caddeeyey oo ku yiri "walaalkay wiilkiisiiyow kuwaasi waa madaxyoweyn". Waxaa isna Rasuulka SCW la hadlay Useyd ibnu Xudeyr (oo ka mid ahaa dadkii madiina ku haray) wuxuu yiri "Rasuulkii Allow Ilaah ayaa mahad iska leh, Allihii ishaada qaboojiyey, Ilaah baan ku dhaartaye rasuulkii Allow ma ahayn dib uga dhiciddeyda Badar in aan malaynayey in aad cadow la kulmaysaan, laakiin waxa aan malaynayeey safarkii (in aad lakulmaysaan), haddii aan malayn lahaa cadowgana ma hareen", Rasuulku SCW wuxuu yiri "run baad sheegtay".
Rasuulka SCW wuxuu intaas ka dib soo galay magaalada Madiina isaga oo soo guuleystey oo Ilaahay soo ciseeyey. Maxaabiistiina waxaa Madiina la keenay maalinkii ku xigey, wuxuuna u kala dhiibay asxaabtiisa, wuxuuna u dardaarmay in la wanaajiyo. Asxaabtu aad ayey u wanaajiyeen maxaabiistaas oo waxay siinayeen cuntooyinkooda kuwii ugu wanaagsanaa. Rasuulku SCW waxa uu kala tashaday asxaabtiisa sidii uu u geli lahaa maxaabiista. Waxaa hadlay oo fikrad soo jeediyey Abuubakar oo yiri "Rasuulkii Allow, wuxu waa walaalaheen, ilma adeerradeen iyo qaraabadeen, waxa aan anigu u arkaa in aad maal ka qaadatid si wixii aan ka qaadano aan gaalada ugu xoogeysana, iyagana waxaa la arkaa in Ilaahay soo hanuuniyo oo ay garab inoo noqdaan".
Wuxuu markaa Rasuulku SCW yiri "maxaa aragtaa ina Khadhaabow", Cumar wuxuu yiri "Ilaah baan ku dhaartaye ma arko ra'yiga Abuubakar ee waxaan arkaa in aad aniga ii dhiibtid hebel qoorta aan ka gooyee, Calina aad u dhiibtid walaalkiis Caqiil binu Abii-dhaalib qoorta ha ka gooyee, Xamsana aad u dhiibtid walaalkiis Cabbas qoorta ha ka gooyee si Ilaahay u ogaado in aannaan wax jacayl ah qalbiga ugu heyn mushrikiinta, kuwanuna waa madaxdoodii iyo hoggaamiyayaashoodii". Rasuulku SCW wuxuu markaa qaatay ra'yigii Abuubakar, wuxuuna ku xukumay in ay xoolo isku furtaan.
Cumar wuxuu yiri "maalinkii dambe ayaan u imid Rasuulka SCW iyo Abuubakar oo ooyaya, markaas ayaa ku iri "Rasuulkii Allow ii sheeg waxa kaa oohiyey adiga iyo saaxiibkaa? haddii aan oohin iska helo waan ooyayaa, haddii kalena waan iska raadinayaa arrintiinna darteed". Markaas ayaa Rasuulku SCW yiri "arrintii ay ii soo bandhigeen saaxiibbadaa, oo ahayd in xoolo laga qaato (maxaabiista), sababteed waxa uu cadaabkeedu iga soo dhowaaday geedkan". Allaahna isagoo arrintaa tilmaamaya wuxuu qur'aankiisa ku yiri:
((UMA HABOONA NABI IN AY U AHAATO KUWA LA QAFAASHAY (MAXAABIIS) ILAA UU KAGA JILCIYO (GAALADA) DHULKA, (OO AY TABAR DHIGAAN) WAXAAD DOONAYSAA MUUQA ADUUNYADA (XOOLO), ALLENA WAXA UU DOONAYAA AAKHIRO (IN AAD GAALO BAABI'ISAAN), ALLE WUXUU AHAADAY (ALLE) QAALIB AH OO XAKIIM AH)), (Suuratu-Anfaal 67).
Allaah SW wuxuu aayaddaan ku canaantay Rasuulka SCW oo qafaashay gaaladii kana aqbalay in ay is furtaan, nimankan oo aan weliba ahayn askar keliya ee ahaa hoggaamiyayaashii ugu khatarsanaa gaalada. Sidaa darteed Allaah wuxuu ku ayiday fikradii Cumar ee ahayd in madaxa laga guro maxaa yeelay Allaah diintiisii ayey la dagaallameen, xoog baan lagu soo qabtay, in la dilona waxaa ku jirey xikmado badan oo Allaah keliya uu koobi karo, waxaana ka mid ah:
1. In aysan mar kale cadowga u soo dagaallamin, Ilaahay diintiisana uga hor imaan sida dhacday in markii la sii daayey ay qaar badan oo ka mid ahi ka soo qayb galeen duuullaamadii dambe ee islaamka lagu soo qaadday.
2. In la tuso in Rasuulka SCW iyo muslimiintu aysan wax naxariis ah u hayn ciddii Ilaahay diintiisa ka hor timaadda.
3. In kuwo badan oo ku dhiirran lahaa dagaalka muslimiinta ay ku quus qaatan oo aysan ku soo degdegin duullaan dambe.
Waxaa lagu xukumay maxabiistii xoolo qiimohoodu u dhexeeyo kun Dirham ilaa Afar kun oo Dirham, qofkii aan waxba haysanna waxaa la amray in uu qoraalka baro toban wiil oo muslimiinta reer Madiina ka mid ah, maxaa yeelay reer Madiina sidaa wax uma qori jirin oo reer Makka ayaa uga horeeyey. Rasuulku SCW wuxuu iska cafiyey oo uusan waxba ka qaadin dhawr nin oo qaarkood u dan sheegtay ayna ka mid ahaayeen; Mudhlab binu Xandal, Seyfi ibnu Abii Rufaaca iyo Abuu Ciisa Al-jumuxi. Abuu Ciise, oo nabiga SCW aad ugu dan sheegtay, kana ballan qaaday in uusan duullaan dambe soo raaci doonin, wuxuuu soo racay duullaankii ku xigey ee Uxud markaas ayaa mar labaad la qabtay oo qoorta loo dheereeyey. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa maxaabiista la cafiyey Abil-Caas oo qabay gabdhii Rasuulka SCW ee Seynab oo wakhtigaas Makka joogtay. Si ay ninkeeda u furato waxay Makka ka soo dhiibtay qoor xirkeedii, oo ay arooskeedii hooyadeed Khadiija siisay. Rasuulku SCW markii loo keenay qoor xirkaas wuxuu asxaabtii ka codsaday in ay u sii daayaan Abil-Caas, iyaguna way ka yeeleen, dabadeedna wuxuu Rasuulku SCW Abil-Caas u shardiyey in uu Seynab soo diro, isaguna waa aqbalay oo markuu Makka tegey ayuu soo diray, ka dibna wuxuu Rasuulku SCW u direy Seyd binu Xaarith iyo labo nin oo Ansaar ah in ay Seynab dhex ka soo wadaan. Waxaa kale oo ka mid ahaa maxaabiista nin la oran jirey Suheyl binu Camar oo u hadli jirey gaalada. Cumar binu Khadhaab ayaa markaas Rasuulka SCW ku yiri "Rasuulkii Allow Suheyl foolasha ka siib, carrabkana jeex si uusan mar kale mowqif dambe ugaga soo hadlin", hase yeeshee Rasuulku SCW wuu ka diiday Cumar fikraddaa uu soo jeediyey maxaa yeelay waa tamthii (dhalan rogid iyo jir xumayn) Islaamkuna ma ogala.
Intaa aan maxabiistii la sii deyn ayaa waxaa Makka aaday nin mulimiinta ka mid ah oo la oran jirey Sacad binu Nucmaan si uu u soo cumraysto. Markii uu Makka tegay ayaa Abuu Sufyaan xabbisay, dadka maxaabiista ahna waxaa ku jirey wiil uu dhalay Abuu Sufyaan oo la oran jirey Camar. Dabadeedna waxaa loo sii daayey wiilkiisii isna wuxuu sii daayey Sacad.
Maxaabiista oo isugu jirey dad la cafiyey iyo dad xoolo isku furtay, sidaa ayaa loo sii daayey. Arrintoodiina waxa ay noqotay siduu Abuubakar soo jeediyey Rasuulkuna SCW ku raacay oo xoolona waa laga helay, badankoodiina aakhirkii waa islaameen. Dagalkii Badarna sidaa ayuu ku dhammaday, waxaana ku soo degtay oo si fiican u qaadaadhgtay suuradda la yiraahdo Anfaal. Dagaalkaas, oo ahaa dagaal qureysh dulleeyey, una keenay khasaare iyo hoog, ummada badan oo awal musliminta u soo miciyo lisanayeyna candhuuftii ayey dib u leqeen ka dib markii ay arkeen waxa ku dhacay qureysh oo ahayd libaaxii carbeed. Waxaana islaamkii qaatay baqdin ay u baqayaan maalkooda iyo naftooda kooxdii awal ka hadhay labadii qabiil ee Ansaar. Waxaana kooxdaas madax u ahaa Cabdullaahi ibnu Ubay ibnu Saloo, oo ahaa ninkii ay reer Madiina rabeen in ay madax ka dhigtaan intii aysan islaamin ka hor. Dadki muslimiinta ahaa Ilaahay wuxuu siiyey ciso iyo guul, wuxuuna ka saaray cabsidii iyo tabar yaridii haysey.